--Lọ - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, igwe ojii, mkpanaka, nyocha
Ndị mmekọ akwadoro
Nganga ịbụ ndị mmekọ agbakwunyere Leadinfo!
Pịa ebe a iji nweta ego 10% na ndebanye aha Leadinfo!
Mmepe Ngwa Weebụ na Ekwentị
Nnukwu nchịkọta data na sayensị data
Nkà na nka na uzu igwe
Ngwọta AR na VR
LEE Ọrụ niile
Nọgide Na-eme Nzọụkwụ Mgbe Niile!
Mee ngwa gị Digital Mgbanwe njem na NewGenApps
Anyị na -arụ ọrụ maka
Na -enye ụdị ọrụ dị iche iche
Anyị na -achọpụta mgbe niile megatrends, Mobile, Cloud, Big Data, AI/ML, Blockchain, Deep Learning, NoSQL, IoT, IIoT Analytics and Insights, GraphQL, Containers, Kubernetes, na ndị ọzọ ịkpọ aha ole na ole n'ime ọtụtụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole emela ya na ọsọ na nha dịka anyị!
Ịntanetị nke ihe
Were ya na ụlọ gị na -agwa gị okwu ma ọ bụ ụgbọ ala gị. Ọnụ ụzọ na -agwa ndị ọkụ ọkụ ọkụ. Akwa! Ọ bụghị ya?
Anyị na -azụlite ọtụtụ ngwa weebụ nke nwere ike idozi nsogbu dị iche iche nke ọma dị ka ihe achọrọ si dị.
iPhone, iPad, Android, Facebook & hazie ngwa Google mmepe ngwa
Nnukwu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla ma ọ bụrụ ahụike, agụmakwụkwọ, ego, imepụta, wdg.
ML bụ omume nyocha data na -arụzi ụlọ nyocha nyocha.
Nhazi asụsụ asụsụ
Alaka nke Amamịghe echiche metụtara imepụta, nghọta na inyocha asụsụ.
Nnukwu nchịkọta data
Nchọpụta wayo, Mbelata ọnụ ahịa na onyinye kachasị mma site n'enyemaka nke Nnukwu nchịkọta data.
MGBE KWESỊRỊ KWESỊRỊ
Na -enye Ọrụ Mbugharị igwe ojii, Ọrụ nnabata mba yana IaaS/ PaaS.
Na-emekọrịta ihe na gburugburu dijitalụ na ezigbo yana na -emepụta usoro ndụ
Eziokwu mere eme
Na -emepụta gburugburu ebe a n'ime ngwa nke ọ na -agwakọta na ọdịnaya ụwa n'ezie.
Dịkwuo ahịa ahịa, Dịkwuo ọnụego nzaghachi mkpọsa, Belata mmefu ahịa.
Ọrụ AMAZON WEB
Ọrụ Weebụ Amazon, na -enye Platform Services Cloud zuru oke.
Sayensị data na stats nke na -ewulite ụkpụrụ nke ụwa gbara gị gburugburu iji nweta nghọta bara uru na ọnọdụ na njikọ. Isiokwu nke nnukwu mmasị na mmụba nke nnukwu nchịkọta data ngwaọrụ na -enye ike ịhazigharị usoro site na nchịkọta ozi a na -ahazighị.
Ru ọgụgụ isi bụ ọgụgụ igwe gosipụtara, n'adịghị ka ọgụgụ isi nke mmadụ na anụmanụ gosipụtara, nke gụnyere nsụhọ na mmetụta mmụọ. A na -egosipụtakarị ihe dị iche n'etiti ndị nke mbụ na nke ikpeazụ site n'obere okwu a họọrọ.
LEM .AKA MACHINE
Ọmụmụ nke algọridim kọmputa na -emeziwanye na -akpaghị aka site na ahụmịhe & site na iji data. A na -eji algọridim n'ọtụtụ ngwa dị iche iche, dị ka nzacha email na ọhụụ kọmputa, ebe ọ siri ike ma ọ bụ enweghị ike ịzụlite algọridim nkịtị iji rụọ ọrụ.
Mgbasa mgbasa ozi na -enye nnukwu ikpo okwu maka ndị ọkachamara ka ha na ndị na -ege ha na ndị ahịa ha na -emekọrịta ihe. Site n'iji ezigbo ngwaọrụ na usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ị nwere ike zụlite ezigbo ndị na -eso ma bụrụ agwa ụlọ ọrụ dị mkpa.
Otu teknụzụ kachasị mkpa n'ime afọ iri a bụ igwe ojii. Sgwé ojii na -enyere ndị azụmaahịa aka ịnye ọrụ dị iche iche na -achọ, na -enyekwa ndị ọrụ ịntanetị ohere ịnweta ọrụ ndị a na -enweghị ịzụta akụrụngwa ọhụrụ.
Ngwaọrụ ịre ahịa nwere ike soro ọganihu gị ma nyekwa ịza ajụjụ nke ga -enyere gị aka ịmịpụta ihe. Site na -akpaghị aka edemede gị, ị nwere ike ịbawanye ọsọ nke ị mechiri azụmahịa. Jide n'aka na pipeline gị na -akpaghị aka, wee lelee ya mgbe mgbe.
Blockchain bụ teknụzụ mgbanwe nke nwere ike ime ka azụmahịa dị mfe yana nwee ntụkwasị obi. Ugbu a, ọnụego ndị mmadụ na -azụta n'ịntanetị na -arị elu, nke a ebutela mmụba na bots na spamming nke weebụsaịtị.
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ ROBOTIC
Akpaaka nke ọrụ dabere na iwu site n'iji ihe ngwanrọ ọkaibe iji belata ịdabere na mmadụ na ọrụ oge niile. Na -ahazi ọdụ data na CRM, ERPs, Nkwado ndị ahịa na -enweghị nlekọta.
N'ịbụ ndị na-eji ụlọ ọrụ teknụzụ eme ihe na mmemme ya dị oke ọnụ ahịa, chatbots bụ ndị mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi na-emekọrịta ihe na mmadụ. Anyị na -ebute ụzọ n'ihu site n'ịzụlite bots nke ya, nke emebere maka ụlọ ọrụ niile.
Anyị Project Isi
Anyị na -ewu na ịzụlite maka ịrụ ọrụ, ibi ndụ na nkwukọrịta. Anyị na -arụ ọrụ na ebumnuche nke ịchọta amamihe, ihe ngwọta ọhụrụ maka nsogbu, nnukwu na obere.
Anyị Core Ụkpụrụ
Ụkpụrụ anyị nwere bụ ịtọ ntọala nke anyị na -arụ ọrụ na ya na omume anyị.
Anyị kwenyere n'inwe ụkpụrụ omume ziri ezi na ụkpụrụ omume na ime ihe ziri ezi, n'agbanyeghị onye na -ekiri.
A na -akwali onye nwere ebumnobi ime ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ibute ụzọ, ị dị njikere ime ihe n'onwe gị.
Njem nke mmepe dị mma nke onye ọ bụla na imeziwanye ọrụ aka yana onwe ya.
Ọ bụrụ na ị bu n'obi ime ihe, ị kpebisiri ike ime ya. Ọ bụrụ na ị nwere ebumnuche, ị nwere ebumnuche ma ọ bụ ebumnuche.
Imejupụta echiche ọhụrụ, ụkpụrụ ọhụrụ na echiche okike iji melite ụzọ a na -esi eme ihe.
Ntak ịhọrọ Anyị?
Maka anyị, ọ bụghị naanị ọrụ - anyị na -anya isi na azịza anyị na -enye na enweghị afọ ojuju ruo mgbe ọrụ ga -emezu ụkpụrụ nke onwe anyị.
Anyị na-agbasi mbọ ike karịa ka ndị ahịa anyị na-atụ anya ya ma soro ha nwee mmekọrịta na-adịte aka.
Anyị nwere 900+ siri ike ahịa-isi.
Fọdụ ndị ahịa anyị anyị na ha bidoro ịrụ ọrụ n’afọ 2008 ka na-arụrụ anyị ọrụ, gosipụtara ngwa ha ọtụtụ oge na App Store na Google Play, blọọgụ na akwụkwọ akụkọ.
Ná nkezi, anyị nwere ihe dịka 80% na-emegharị azụmahịa.
Team nwere ahụmahụ
Anyị na-emepe ngwa ngwa ngwa kemgbe iOS na gam akporo izizipụtara maka ndị mmepe na 2008.
Anyị nwere otu ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ nwere ike ịhazigharị ụlọ ọrụ gị site na nke ga-aga n'ihu na teknụzụ ọhụrụ na usoro ọrụ.
Anyị enyefela ngwa dị mgbagwoju anya yana igwe ojii igwe chọrọ ngalaba nka.
Otu nkwụsị ahịa
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ site na imewe, ngwa mkpanaka (nwa afọ, ikpo okwu), mmepe webụsaịtị na azịza igwe ojii ka ị ghara ịchọ ndị otu dị iche iche ebe. Cheta:
Anyị nwere ndị ọkachamara n'ihe gbasara isiokwu (SMEs) ọkachamara na teknụzụ ha.
Anyị na-ahụ maka igwe ojii na-esite na Amazon Web Services (AWS) iji nye igwe ojii tụkwasịrị obi maka azịza maka mkpa azụmahịa gị niile.
Anyị itinye ego anyị tọdọ mmiri dị jụụ maka ndị ọrụ anyị iji nọrọ n'ihu onyinye mkpa site na usoro nyocha na-aga n'ihu.
Anyị na-enyocha ndị otu anyị nke ọma mgbe anyị na-ewe ha.
Ndi otu anyi na-aga ogbako ndi ozo (dika WWDC).
Anyị na-eme onwe anyị ka anyị dị ọhụrụ site na ọganihu ọhụrụ na teknụzụ anyị na-arụ ọrụ na ya.
Anyị ghọtara ma ọ bụrụ na itinye ego enweghị ROI dị mma mgbe ahụ agaghị etinye ego ahụ.
Ogo dị elu, azịza ọnụ ala na-eji ihe atụ n'ụsọ.
Oge ngwa ngwa-gaa-ahịa.
Iji ndebiri ndebiri anyị na-agba mbọ hụ na anyị mepụtara mmeri merie ma ị ga-enwe nnukwu RoI.
Anyị na-agbaso usoro ndụ ndụ na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe iji nyere ndị otu anyị aka ịzaghachi na enweghị atụ site na iterations oge niile.
Anyị nwere ike ịhazigharị onwe anyị ka anyị gbanwee ma nwee nnukwu mmekọrịta.
Ọ bụrụ na ị bụ mmalite na ịchọrọ ịhụ etu ngwaahịa gị si agbanwe na ọkwa ọ bụla, mgbe ahụ ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. Nwere ike ịdebe usoro nke nkwalite gị n'oge ọ bụla nke mmepe ya.
Ngwaọrụ kachasị mma maka ekwentị gị Business
Ndị ahịa obi ụtọ
Mba nke ndị ahịa
Obi ụtọ ahịa
Enwere m obi anụrị na ọrụ m NewGenApps. Ndị otu ahụ pụtara ìhè. Nnọọ anabata na -ajụ ase. Ha na -ajụ ajụjụ ndị dị mkpa ma na -atụ aro nke ọma n'agbanyeghị isiokwu. Ama m mgbe niile na m nọ na aka dị mma na m ga-enweta kpọmkwem ihe m rịọrọ- ma ọ bụ ka mma. Mmekọrịta bụ, ka ọ dị ugbu a, NewGenApps ihe kacha mkpa. Enwere m ike mgbe niile ị nweta azịza doro anya na nke doro anya ozugbo. Apụghị m ichere ma ọ bụ mebie azịza ya- ọ na-abịa ozugbo. Ndị otu a nwere ụkpụrụ ọrụ dị egwu ma na -eche banyere ndị ahịa ha nke ukwuu. Ana m eme atụmatụ ime ọtụtụ ọrụ NewGenApps, ma kwado onye ọ bụla na -ewu ngwa ka ọ mee otu ihe ahụ. Otu egwuregwu na -arụ ọrụ nke ọma. M ga -ebu ụzọ elegara NGA anya maka ọrụ ọ bụla.
Okwu na Milo
Enwere m obi anụrị na ọrụ m NewGenApps. Ndị otu ahụ pụtara ìhè. Nnọọ anabata na -ajụ ase. Ha na -ajụ ajụjụ ndị dị mkpa ma na -atụ aro nke ọma n'agbanyeghị isiokwu. Ama m mgbe niile na m nọ na aka dị mma na m ga-enweta kpọmkwem ihe m rịọrọ- ma ọ bụ ka mma. Mmekọrịta bụ, ka ọ dị ugbu a, NewGenApps ihe kacha mkpa. Enwere m ike mgbe niile ị nweta azịza doro anya na nke doro anya ozugbo. Apụghị m ichere ma ọ bụ mebie azịza ya- ọ na-abịa ozugbo. Ndị otu a nwere ụkpụrụ ọrụ dị egwu ma na -eche banyere ndị ahịa ha nke ukwuu. Ana m eme atụmatụ ime ọtụtụ ọrụ NewGenApps, ma tụọ aro ka onye ọ bụla na -ewu ngwa mee otu ihe ahụ. Otu egwuregwu na -arụ ọrụ nke ọma. M ga -ebu ụzọ elegara NGA anya maka ọrụ ọ bụla.
Mgbasa ozi mmekọrịta Akashik
Newgenapps mere ihe ịtụnanya ọrụ m. Ndị otu ahụ gara maịl na mpaghara niile! Ọkachamara ha, nka nka miri emi, nnukwu nhazi nhazi, nnukwu nkwukọrịta yana njikwa otu nwere ahụmihe mere nke ọma. Ihe niile site na ntinye aka ruo nke ikpeazụ anapụta - Newgenapps gbapuo mpi. Mgbe ihe ịma aka nka pụtara, ndị otu ahụ mere ngwa ngwa chọpụta nhọrọ mkpebi wee gwa ha otu anyị nke ọma ka ha kpebie nhọrọ kacha mma. Newgenapps bụkwa ezigbo ndị nkuzi na mpaghara anyị enweghị ahụmịhe - na -eje ije anyị site na usoro achọrọ na usoro iji nweta ọrụ ahụ ngwa ngwa yana nke ọma. Nke a bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike iwulite mmekọrịta ogologo oge. Anyị na -akwado ha nke ọma ma anyị na -atụ anya ịrụ ọrụ Newgenapps na ọrụ ọzọ anyị.
Ka anyị wuo dị egwu!
Ọhụrụ si Blọọgụ
Amụma mmụta igwe 2021-2022: Ebe ML na-aga NextWidth
Sep 18 | Igwe ihe igwe
(isi mmalite) Nkwado ahaziri iche sitere na YouTube na Netflix, Enyemaka Smart Home, Ịghọta olu, ...
Ngwaọrụ iri kacha mma maka weebụsaịtị CMS gị
Onye ọchụnta ego ọ bụla na -eme ike ha niile iji guzobe ọnụnọ mmekọrịta siri ike, ma ị na -emeziwanye nke ha dị ugbu a ...
Otu teknụzụ Blockchain si agbanwe ala na ụlọ
Sep 17 | ngọngọ Chain, Ahịa ịre ụlọ
Ikpo okwu ya na -eme ka azụmahịa ezigbo ụlọ na -apụta. Teknụzụ ngọngọ nke Propy na -edekọ nzọụkwụ ọ bụla nke ezigbo ...